Suuqa kala iibsiga Premier League oo xirmay iyo Tottenham oo dhigtay RIKOODH aan weligii horey loo sameyn – Gool FM
Horudhac: Fiorentina vs AC Milan… (Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka ay Rossoneri booqanayso Magaalada Florence)
Horudhac: Leicester City vs Manchester City … (Kooxaha Sky Blue iyo Foxes oo isku qaban doona kulankoodii 100-aad ee horyaalka)
Horudhac: SPAL 2013 vs Juventus… (Bianconeri oo eegaysa inay guul gaarto si ay u dheereysato dhibcaha hoggaanka horyaalka Serie A)
Horudhac: Barcelona vs Eibar… (Wiilasha Quique Setien oo eegeya guushoodii shanaad oo xiriir ah ee garoonkooda horyaalka La Liga)
Horudhac: Chelsea vs Tottenham Hotspur… (Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka maanta ee London Derby)
Zidane oo si RASMI ah ugu dhawaaqay liiska xiddigaha kooxda Real Madrid ee ka qeyb galaya kulanka Levante
Frank Lampard oo sheegay mudada uu N’Golo Kanté ka maqnaanayo safka kooxda Chelsea
Klopp oo shaaca ka qaaday mudada uu garoomada ka maqnaanayo Henderson kaddib dhaawacii ka soo gaaray kulankii Atletico Madrid
Jurden Klopp oo u jawaab celiyay Tageere Manchester United ah kaddib markii uu….
Suuqa kala iibsiga Premier League oo xirmay iyo Tottenham oo dhigtay RIKOODH aan weligii horey loo sameyn
Byare August 9, 2018
(London) 09 Agoosto 2018. Suuqa kala iibsiga ciyaartoyda Premier League ayaa xirmay saacad ka hor balse waxaa harsan labo saacadood oo dheeri ah oo ay kooxaha ku dhammeysan karaan heshiisyada Ciyaartoyda uu wada hadalada u socday ka hor inta uusan suuqa xirmin.
Tottenham ayaa dhigtay Rikoodh aan weligii horey looga dhigin Ingiriiska tan iyo sidii loo hirgaliyay Suuqa kala iibsiga ciyaartoyda sanadii 2003.
Waxay noqotay naadigii ugu horreeyay oo aan wax saxiix ah ka sameyn suuqa.
Tababare Mauricio Pochettino ayaa go’aansaday inuu hal ciyaaryahan ku soo darin shaxdiisa taa oo dhibaato ku noqon karta.
Naadiga Leeds United ayaa noqon gaartay naadigii ugu horreeyay ee aan wax saxiix ah ka sameyn suuqa kala iibsiga Ciyaartoyda sanadii 2003 balse hal ciyaaryahan ayay ugu dambeyn la wareegtay taa oo ka dhigeysa Tottenham naadiga kaliya taariikhda Premier League oo aan wax saxiix ah ka sameyn suuqa.
Arjen Robben oo fariin ku aadan Jérôme Boateng u diray maamulka sare ee kooxda Bayern Munich
RASMI: Leicester City oo heshiis cusub ka saxiixatay weeraryahankeeda Jamie Vardy